Wholesale Vape Bans in the United States uye Around the World fekitari uye vagadziri | SMOORE
Vape Kurambidzwa muUnited States uye Kutenderera Nyika
Maitiro epamutemo nezvekupisa uye nicotine kushandiswa zvakawandisa zvinosiyana. MuUnited Kingdom, kuputika kunonyanya kukurudzirwa nemasangano ehurumende ehutano. Nekuti kusvuta kunounza mutoro unodhura kuUK's National Health Service, nyika inomira kuchengetedza mari kana vanosvuta vakachinjisa e-midzanga panzvimbo.
Dzimwe nyika zhinji dzinobvumidza yakatemerwa musika wekupisa, asi havana shungu mukubvumidza kwavo tsika. MuUS, iyo FDA ine masimba pamusoro pezvigadzirwa zvemhute, asi yapedza makore masere apfuura kuyedza kugadzira anoshanda marongero ehurongwa. Canada yakamboteedzera iyo UK modhi, asi sekuAmerica, matunhu ayo akasununguka kuita yavo mirawo iyo dzimwe nguva inopesana nezvinangwa zvehurumende yemubatanidzwa.
Kune nyika dzinopfuura makumi mana idzo dzine imwe mhando yekurambidzwa kufema - kungave kushandisa, kutengesa kana kupinza kunze kwenyika, kana mubatanidzwa. Vamwe vane kurambidzwa kwakazara kunoita kuti vaping zvisiri pamutemo, kusanganisira kurambidza zvese kutengesa uye kutora. Kurambidzwa kunowanzoitika muAsia, Middle East, uye South America, kunyangwe kurambidzwa kwakanyanya nicotine kuri kweAustralia. Dzimwe nyika dzinovhiringidza. Semuenzaniso, kufefetera muJapan zviri pamutemo uye zvigadzirwa zvinotengeswa, kunze kweiyo e-mvura ine nicotine, izvo zvisiri pamutemo. Asi kupisa-kwete-kupisa fodya zvigadzirwa seIQOS zviri pamutemo zviri pamutemo uye zvinoshandiswa zvakanyanya.
Zvakaoma kuteedzera ese shanduko mumitemo yekupisa. Izvo zvatakaedza pano rundown kune nyika dzakarambidzwa kana zvakakomba kurambidzwa pakupisa kana zvigadzirwa zvemhepo. Pane tsananguro pfupi. Izvi hazvirevi segwara rekufamba kana matipi pakufamba uye kubhururuka. Kana iwe uchishanyira nyika isingazivikanwe iwe unofanirwa kutarisa neinowedzeredza-uye-sosi sosi senge embasi yenyika yako, kana hofisi yekufambisa yenyika yauri kushanyira.
Nei nyika dzichirambidza kupisa?
Sangano reWorld Health Organisation (WHO) pamwe nehutongi hwefodya ruoko rweChirongwa cheChirongwa cheKutonga Kwefodya (FCTC) - chibvumirano chepasirese chakasainwa nenyika dzinopfuura zana nemakumi masere - vakurudzira kurambidzwa uye kurambidzwa pae-fodya kubvira zvigadzirwa zvekutanga zvatanga kusvika kuEurope uye Mhenderekedzo dzeUS muna 2007. IWHO ine simba (uye kazhinji rine simba) pesvedzero pamitemo yehutano nekusvuta munyika zhinji - kunyanya munyika dzine hurombo, uko iyo WHO inobhadhara zvirongwa zvinoshandisa vazhinji vashandi vehutano hweveruzhinji.
Iyo FCTC pachayo inotungamirwa nevanopa mazano kubva kumasangano akazvimiririra eAmerica anodzivirira kuputa seMushandirapamwe weFodya-Mahara Vana - kunyangwe iyo US isiri bato muchibvumirano. Nekuti aya mapoka akarwa zino nezvipikiri kurwisa kuputika uye zvimwe zvigadzirwa zvekudzora fodya, nzvimbo dzadzo dzakatorwa neFCTC, nemhedzisiro yakaipa kune vanosvuta munyika zhinji. Iyo FCTC yakaraira nhengo dzayo (nyika zhinji) kurambidza kana kuomesa zvine mutsindo e-midzanga, kunyangwe chibvumirano chekutanga gwaro rinonyora kudzikisira senzira inodiwa yekutonga fodya.
Nyika zhinji dzinovimba nekutengeswa kwefodya, uye kunyanya kutengesa fodya, pamitero yemari. Mune zvimwe zviitiko, vakuru vehurumende vakatendeseka nezve sarudzo yavo yekurambidza kana kudzora zvigadzirwa zvinopisa kuchengetedza mari yefodya. Kazhinji hurumende dzinosarudza kuisa vapes mune yavo fodya zvigadzirwa mutemo, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuisa mutero wekuranga kune vatengi. Semuenzaniso, Indonesia payakatemera mutero we57 muzana pae-fodya, mukuru webazi rezvemari akatsanangura kuti chinangwa chemubhadharo uyu "kudzora kudyiwa kwemhepo."
Ruzhinji kufema munyika zhinji kunorambidzwa sekusvuta midzanga, zvakanyanya senge kuUnited States. Kana iwe uri kushamisika kana iwe uchigona kutora voruzhinji, iwe unogona kazhinji kuona imwe vaper kana kuputa uye kubvunza (kana chiratidzo) kuti ndeipi mitemo. Kana usina chokwadi, usangozviita. Iko kufema zvisiri pamutemo, iwe zvirinani uve nechokwadi chekuti mitemo haizosimbisirwe usati watanga kupopota.
Ndezvipi zvigadzirwa zvemhepo zvinorambidzwa kana kudzivirirwa?
Chinyorwa chedu chakakura, asi pamwe hachina kujeka. Mitemo inoshanduka nguva dzose, uye kunyangwe kutaurirana pakati pemasangano anomiririra kuri kuvandudzika, hakuchina nzvimbo yepakati yekuchengetedza ruzivo pamusoro pemitemo inoputika pasi rese.Runyorwa rwedu runobva mukubatanidzwa kwezvinhu: iyo Global State yeFodya Inokuvadza Kuderedza mushumo kubva kuBritish kukuvadza kudzikisira sangano rekuzivisa Zivo-Chiito-Shanduko, Mushandirapamwe weFodya-Mahara Vana 'Fodya Kudzora Mitemo webhusaiti, uye Global Fodya Kudzora saiti yakagadzirwa naJohns Hopkins University vatsvagiri. Chimiro cheimwe countries yakatemwa nekutanga kutsvagisa.
Dzimwe dzenyika idzi dzakarambidzwa zvachose kushandiswa nekutengesa, mazhinji anongorambidza kutengesa, uye mamwe anorambidza nicotine kana zvigadzirwa zvine nicotine. Munyika zhinji, mitemo inofuratirwa. Mune vamwe, vanomanikidzwa. Zvekare, tarisa neyakavimbika sosi usati waenda kune chero nyika ine vaping giya uye e-mvura. Kana nyika isina kunyorwa, kufema kunogona kubvumidzwa uye kudzorwa, kana pasina mutemo chaiwo unodzora e-midzanga (sezvazvino zvakadaro).
Tinogamuchira chero ruzivo rutsva. Kana iwe uchiziva nezve mutemo wakashanduka, kana mutemo mutsva unobata runyorwa rwedu, ndokumbira utaure uye isu tichagadzirisa zvinyorwa.
Zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa
Zviri kunze kwemutemo kutengesa, kunze kwemishonga inogamuchirwa
Zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kupinza kana kutengesa. MunaFebruary 2020, mutungamiri weMexico akaburitsa mutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu zvese zvinopisa, kusanganisira zero-nicotine zvigadzirwa. Iko kune, zvakadaro, kuchiri nenharaunda inokura iri kuwedzera munyika, uye hutungamiriri hwekukurudzira neboka revatengi Pro-Vapeo Mexico. Hazvisati zvazivikanwa kana hurumende ichaedza kutora zvigadzirwa zvakaunzwa munyika nevashanyi
Kutenda zvisiri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa chikakananda
Zviri pamutemo kushandisa, zviri pamutemo kutengesa-asi kutengesa zvigadzirwa zvakagadzirwa mushure meAug 8, 2016 zvinorambidzwa pasina odhi yekushambadzira kubva kuDFA. Hapana kambani ine vape yakanyorera odhi yekushambadzira parizvino. Musi waSeptember 9, 2020, zvigadzirwa zvisati zvaitika 2016 zvisati zvaendeswa kuti zvibvumidzwe kushambadzira zvichave zvisiri pamutemo kutengesa
Zviri pamutemo kushandisa, zvinotendwa zvisiri pamutemo kutengesa, kunze kwekubvumidzwa zvigadzirwa zvekurapa
Kutenda zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa - asi chimiro hachina chokwadi
Kutenda zvisiri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa
Zvepamutemo zvekushandisa, zvinotendwa zvisiri pamutemo kutengesa
Zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa - zvisinei, nyika yakazivisa mu2019 chinangwa chayo chekumisikidza uye kudzora e-midzanga
Bangladesh parizvino haina mitemo kana mirau yakanangana nekupenga. Zvisinei, muna Zvita 2019 mukuru webazi rezvehutano akaudza Reuters kuti hurumende "iri kushanda nesimba kuti irambidze kugadzirwa, kupinzwa uye kutengeswa kwe e-fodya uye ese anoputa tobaccos kudzivirira njodzi dzehutano."
Zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa zvigadzirwa zvakawanda
Kurambidzwa: zvisiri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa
MunaGunyana 2019, hurumende yepakati yeIndia yakarambidza kutengeswa kwezvinhu zvinoputika. Hurumende, ichinyatsoziva kuti maIndia emamiriyoni zana anosvuta uye kuti fodya inouraya vangangoita miriyoni vanhu pagore, haina kuita danho ripi zvaro rekudzikisa kuwaniswa fodya. Hazvina kuitika, hurumende yeIndia ine 30 muzana yekambani huru yefodya munyika
Zviri pamutemo kushandisa, zviri pamutemo kutengesa zvishandiso, zvisiri pamutemo kutengesa nicotine-ine mvura (kunyangwe vanhu vachikwanisa kupinza zvigadzirwa zvine nicotine nezvimwe zvinorambidzwa). Kunopisa fodya zvigadzirwa (HTPS) senge IQOS zviri pamutemo
Zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa nicotine-ine zvigadzirwa. Kunyangwe hazvo kutengesa kwevatengi kwezvigadzirwa zvine nicotine zvisiri pamutemo, Malaysia ine musika unobudirira unopisa. Zviremera zvakapota zvichirova vatengesi nekutora zvigadzirwa. Kutengesa kweese vaping zvigadzirwa (kunyangwe isina nicotine) zvakarambidzwa chaiko kumatunhu eJohor, Kedah, Kelantan, Penang neTerengganu
Kutenda kunorambidzwa, zvichibva pane Chinyorwa chaNyamavhuvhu 2020
Zviri pamutemo kushandisa (zvakarambidzwa pazere vanhu), zvisiri pamutemo kutengesa
Kurambidzwa: zvisiri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa. Segore rapfuura, kuve nemhosva zvakare imhosva, inoripiswa faindi inosvika kumadhora chiuru nemazana mashanu
Kutenda zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa. Thailand yakawana mukurumbira wekusimbisa kurambidzwa kwayo kupinza uye kutengesa zvigadzirwa zvinopisa nezviitiko zvinoverengeka zvepamusoro mumakore apfuura, kusanganisira kusunga vapashiri vachitsvaga "kupinza." Hurumende inonzi iri kuongorora zvakare mitemo yayo yakaoma ye e-fodya
Kutenda zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa
Zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kupinza kana kutengesa. Kutengesa uye kupinza kunze kwenyika zvigadzirwa zviri kunze kwemutemo hazvibvumirwe muTurkey, uye nyika payakasimbisa kurambidzwa kwayo muna2017, iyo WHO yakaburitsa nhepfenyuro ichikurudzira danho iri. Asi iyo mitemo iri kupokana, uye kune musika unopisa uye nharaunda iri kupisa muTurkey
Zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa nicotine. MuAustralia, kuva kana kutengesa chikakananda hakubvumidzwi pasina tsamba yechiremba, asi kunze kwenzvimbo imwe chete (Western Australia) zvishandiso zvinopisa zviri pamutemo kutengesa. Nechikonzero ichocho kune musika unobudirira unopisa kunyangwe mutemo. Zvirango zvekubata zvinosiyana kubva kune imwe nyika kuenda kune inotevera, asi zvinogona kunge zvakanyanyisa
Zviri pamutemo kushandisa, zvisiri pamutemo kutengesa - kunyangwe nyika ichiita senge yave padanho rekugadzirisa zvigadzirwa zvinopisa
Chenjerera uye tsvaga!
Zvekare, kana iwe uchishanyira nyika yausina chokwadi nezvayo, ndapota tarisa nezvakapihwa munyika iyoyo nezve iyo mitemo uye izvo zvinogona kubvumidzwa nezviremera. Kana iwe uri kuenda kune imwe yenyika umo kuve nemhepo zvisiri pamutemo - kunyanya kuMiddle East nyika - funga kaviri nezvekuti wakatsunga sei kutora vape, nekuti unogona kusangana nemhedzisiro. Mazhinji epasi anotambira vapers mazuvano, asi kumwe kuronga nekutsvagisa kunogona kuchengetedza rwendo rwako runofadza kubva mukushanduka kuita hope dzehusiku.
E Midzanga Blister Pack, E Liquid Vapor Midzanga, Kusvuta Imwe nzira, Newport E Midzanga, Midzanga Yekupisa, Epen,